जोखिमभत्ता माग गर्दा प्रहरीबाट कुटिए वीर अस्पतालका कर्मचारी — Ratopost.com News from Nepal
काठमाडौँ, १७ साउन । कोरोना महामारीमा खटिएबापतको सेवा सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत वीर अस्पतालका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको छ। माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीरका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमको कार्यकक्षमा पुगेका कर्मचारीहरुमाथि हातपात भएको हो।
विगत आठ महिनादेखि जोखिमभत्ता र सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनरत छन्। पटक-पटक सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखे पनि पूरा नभएपछि उनीहरु पुनः माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन डा. गौतमको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। वार्ताकै क्रममा प्रहरीले चार जना महिला कर्मचारीमाथि हातपात गरेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वीर अस्पतालका अध्यक्ष खुबराज आचार्यले बताए। ‘सेवा सुविधाका लागि पटक-पटक भन्दा पनि नभएपछि हामीले पुनः आग्रह गर्नका लागि गर्‍यौं। सेवा सुविधा नपाएपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित त हुन्छन् नै,’ उनले भने।
आठ महिनादेखि सेवा विस्तार भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, कोभिड १९ जोखिम भत्ता नपाएको आन्दोलनरत कर्मचारीले बताएका छन्। कर्मचारीले डा. गौतमले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा प्रहरी बोलाएर कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन्।